Iindaba - Xa usebenzisa umatshini oqhekezayo kwimveliso, inkqubo yokuqhekeza kufuneka ihlawulwe kwaye ayimele ithathwe kancinci.
Xa usebenzisa umatshini wokuqhekeza kwimveliso, inkqubo yokuqhekeza kufuneka ihlawulwe kwaye mayingathathwa kancinci.
Xa usebenzisa umatshini wokuqhekeza kwimveliso, inkqubo yokuqhekeza kufuneka ihlawulwe kwaye ayimele ithathwe kancinci.
Xa usebenzisa umatshini wokuqhekeza kwimveliso, inkqubo yokuqhekeza kufuneka ihlawulwe kwaye ayimele ithathwe kancinci. Ke ngoko, eli nqaku liza kudibanisa ifilimu edityanisiweyo ye-BOPP / LDPE, iingxaki zomgangatho ezenzeka kwinkqubo yokuqhekeza kunye neengxaki ezinxulumene nomatshini wokuqhekeza.
1. Lawula isantya sokusika
Xa ungena kwimveliso yesiqhelo, isantya somatshini oqhekezayo kufuneka silandele ngokungqongqo iimfuno zenkqubo. Ukuphakama kakhulu kuya kuchaphazela umgangatho wokusika. Ke ngoko, ngokulawula isantya sokukroba, umgangatho ofunekayo wokukroba unokufunyanwa. Kungenxa yokuba, kwimveliso, abanye abasebenzisi ngokunyusa isantya sokusika ukuze bandise imveliso kunye nokuphucula izibonelelo zabo zoqoqosho. Oku kuyakwenza ukuba ifilimu ithambekele kwimigca emide kunye neengxaki zokwahlulahlula umgangatho phantsi kokusebenza ngesantya esiphezulu.
2. Khetha inkqubo efanelekileyo yokusika ngokuhambelana nezixhobo kunye nokusebenza kwefilimu
Kwimveliso eqhelekileyo, kuyimfuneko ukwamkela itekhnoloji efanelekileyo yokusika kwimveliso ngokwendlela yokusebenza kwezixhobo, iipropathi zangaphakathi zefilimu, kunye neendidi ezahlukeneyo kunye nokubalulwa kwefilimu. Ngenxa yokuba iiparameter zenkqubo, iindlela zokuchonga, kunye namaxabiso eefilimu ezahlukileyo ezahlukileyo, inkqubo kufuneka ihlengahlengiswe ngononophelo kwimveliso nganye.
3. Nika ingqalelo ekukhetheni ngokuchanekileyo iindawo zokusebenzela
Kwimveliso, ukusetyenziswa rhoqo kwesikhululo ngasinye seslitter kwahlukile, ke inqanaba lokunxiba lahlukile. Ke ngoko, kuya kubakho umahluko othile kwintsebenzo. Umzekelo, kukho imigca ethe nkqo ethe tyaba yokuqhekeza iimveliso zikwimeko engcono. Ngokuphambene noko, kukho imivimbo engaphezulu. Ke ngoko, umqhubi ngamnye kufuneka anike ingqalelo kukhetho oluchanekileyo lweendawo zokusebenzela, anike umdlalo opheleleyo kwimeko efanelekileyo yezixhobo, abambe ukusetyenziswa kwesiza, asoloko esonga amava, kwaye afumane ukusetyenziswa kweempawu ezilungileyo zesixhobo.
4. Qinisekisa ukucoceka kwefilimu
Ukongeza, kufanele kuqatshelwe ukuba ngexesha lenkqubo yokuqhekeza, umqulu ngamnye wefilimu uyavulwa kwakhona emva koko ubuyiselwe umva, nto leyo edala iimeko zokungena kwezinto zangaphandle. Kuba imveliso yefilimu uqobo isetyenziselwa ukupakisha ukutya kunye namayeza, ke ngoko, iimfuno zempilo zingqongqo kakhulu, ke kufuneka kuqinisekiswe ukuba uluhlu ngalunye lwefilimu lucocekile.